Water to Air Heat Pump Air Conditioner - Foshan Blueway လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ, Ltd.
သ, Blueway ပြီးပြီ 10000 ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုနှင့်အတူအင်ဂျင်နီယာဖြေရှင်းချက်. What's more, Blueway သည်တရုတ်စျေးကွက်ရှိ Hilton Hotel မှထောက်ခံသည့်အမှတ်တံဆိပ်လည်းဖြစ်သည်. Blueway သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမိတ်ဖက်များအားအမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်များကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ကတိက ၀ တ်များကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်. မေး: Any product appearance option?
က: ယေဘူယျအားဖြင့်, adopt white or grey for fast production. Side or top discharge is optional.
မေး: How about the production time?
က: အကြောင်း 35 working days after receipt the payment.
မေး: Adopt which refrigerant?
က: Friendly energy-saving R410a.
မေး: Can it ship by air?
က: Yes, we can provide air shipment service if needed.
မေး: With what kind of controller?
က: Adopt wired controller as standard.
မေး: Hong long is the warranty time?
က: 1 year for the whole unit,3years for the compressor.
မေး: What’s the payment method?
က: ယေဘူယျအားဖြင့်, T/T by bank.
Off T1 ရေကူးကန်အပူပေးစက်တွင်
Off T3 ရေကူးကန် Heat Pump တွင်
ပေါင်းစပ်ရေပူရေပူ Pump အားလုံးတစ်ခုမှာ